नौ कक्षा पास गरेका दिलीपले बनाए कम्प्यूटरबाट चल्ने मोटरसाइकल, के छ खास ? « Naya Bato
नौ कक्षा पास गरेका दिलीपले बनाए कम्प्यूटरबाट चल्ने मोटरसाइकल, के छ खास ?
भारतका एक युवाले पर्यावरण मैत्री मोटरसाइकल बनाएका छन्। उनले बनाएको मोटरसाइकल सायदै ‘जेम्स बोन्ड’ जस्ता हलिउड फिल्ममा मात्र देखिएका छन्।
जेम्स बोन्डका फिल्मका शौखिन दिलीप सेनलाई यो बनाउने आइडिया हलिवुड फिल्मबाटै मिलेको उनले बताएका छन्। दिलीपले समाचारमाध्यमलाई बताएअनुसार यो मोटरसाइकलको इन्जिनमा परिवर्तन गरिनुका साथै साइलेन्सर पनि अलग तरिकाले डिजाइन गरिएको छ।
यसको इन्जिन ल्यापटपको मदरबोर्डबाटै नियन्त्रण हुन्छ। आकस्मिक समस्याका लागि सेन्सर जडान गरिएको छ जसको जानकारी मोबाइलमै आउँछ। यसमा पंक्चर भएमा आफैं हावा भरिने, अटोमेटिक इन्जिन कुलिङ मोड, रेकर्डिङ मोड जस्ता फिचर छन्।
तेस्रो लिंगीले यसरि लिन्छन् सेक्सको मजा
आज राति आकाशमा यस्तो रमाइलो दृश्य देख्न सकिने, पहिलाको भिडियो हेर्नुहोस
पाँच महिनाको बाच्छोसँग ७४ वर्षीया बृद्धाले गरिन् विवाह, यस्तो थियो कारण
बेवास्ता गरि फोहोरमा फालिएको बोरा खोलेर हेर्दा उड्यो होस्